MUNA | Myanmar News Agency
မော်လမြိုင်တွင် အုပ်စုတစ်စုမှ ဓါးဖြင့်ဝင်ခုတ်သဖြင့် ၂ဦးဒဏ်ရာရ ကျူးလွန်သူ ၂ဦးဖမ်းမိ
Facebook လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်ခဲ့မှု အကောင့်သန်း (၅၀) ထိခုိက်၊ အကောင့် သန်း ၉၀ fb မှ Log Out လုပ်ခဲ့ရ
အင်ဒိုနီးရှား ဆူလာဝေစီကျွန်းတွင် အင်အား ၇.၅ ရှိ ငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးနောက် ဆူနာမီလှိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဒူတာတေးကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတင်ဖို့ တောင်းဆို
အမျိုးသမီး ၆၀၀၀ ကျော်နဲ့အိပ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် အီတလီအပြာသရုပ်ဆောင် အမျိုးသမီး(၁)ဦးနဲ့လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် သေဆုံး
Posted By: MUNA
မော်လမြိုင်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ မွန်ပြည်နယ် ၊ မော်လမြိုင်မြို့သံလွင်ဥယျာဉ်ဝင်းအတွင်းရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် မျက်စောင်းထိုးရင်ပြင်တွင် ယမန်နေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်) ည ၁၂နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်က အုပ်စုဖွဲ့ စားသောက်နေသည့်လူတစ်စုကို လူ(၆)ယောက်ခန့် ပါဝင်သည့်လူတစ်စုက ၊ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်စွာအုပ်စုဖွဲ့ ဓားခုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီး
ကာလီဖိုးနီးယား၊ စက်တင်ဘာ (၂၉) Facebook လုံခြုံရေး ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုကြောင့် တိုက်ခိုက်သူများက ရယူခွင့်ရသွားသည့် အကောင့်ပေါင်း သန်း၅၀ခန့် ထိခုိက်မှု ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူမှုကွန်ရက် Facebook က တွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု သောကြာနေ့တွင် Facebook မှ ပြောကြားသည်။ အာရှတိုက်တခွင် Facebook
ပါလူ၊ စက်တင်ဘာ (၂၈) အင်ဒိုနီးရှား ဆူလာဝေစီကျွန်းရှိ ပါလူမြို့တွင် သောကြာနေ့ညနေက အင်အား ၇.၅ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်ကြီး လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဆူနာမီလှိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ”ပါလူမြို့မှာ ဆူနာမီ ရေလှိုင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်”ဟု အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အေဂျင်စီအကြီးအကဲက ပြောကြားသည်။ ဆူလာဝေစီကျွန်း အလယ်ပိုင်း ပါလူမြို့မှာ
စက်တင်ဘာ ၂၈ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေး က သူ့အနေနဲ့ မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွင်း လူများစွာသတ်ခဲ့တာကို ဝန်ခံကြောင်းပြောကြားပြီး မကြာခင်မှာပဲ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ အတိုက်အခံများက သမ္မတဒူတာတေးကို တရားစီရင်ဖို့ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး(ICC)ကို သောကြာနေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၈)မှာ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း CNA သတင်းတစ်ရပ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၈ အီတလီရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး အမျိုးသား အပြာသရုပ်ဆောင် မော်ရီဇီယို ဇန်ဖန်တီ ဟာ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း ဗြိတိန် ဒေးလီးမေးလ် သတင်းတစ်ရပ်မှာ ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ သေဆုံးချိန်အထိ အမျိုးသမီး ၆၀၀၀ ကျော်နဲ့
ရခုိင်ပြည်နယ်ပြသနာကို နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စဖြစ်အောင် မပြုလုပ်သင့်ဟု တရုတ်ပြော
ဘေဂျင်း၊ စက်တင်ဘာ (၂၈) မြန်မာနိုင်ငံမှ လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု သက်သေများ ရှာဖွေစုဆောင်းမည့် အဖွဲ့တစ်ခု တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းရန် ကုလသမဂ္ဂက ပြင်ဆင်နေသည့်အပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ်ပြသနာကို ခက်ခဲရှုတ်ထွေးအောင်ချဲ့ထွင်၍ နိုင်ငံတကာပြသနာဖြစ်အောင် မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း တရုတ်ထိပ်တန်းသံတမန်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်ဟု ရိုက်တာ က ရေးသားထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂလူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီက မြန်မာပြည်အ နောက်ပိုင်း
အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိတို့ လုပ်ခဲ့သောအလုပ်သည် ရာနှုန်းပြည့်ဖြူစင်ကြောင်း အာမခံနိုင်သလား ဟု ဦးသန်းဌေး ပြော
အုတ်တွင်း။ စက်တင်ဘာ ၂၈ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို ကိုင်တွယ်ကျင့်သုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်များ မိမိတို့ လုပ်ခဲ့သောအလုပ်သည်ရာနှုန်းပြည့်ဖြူစင်ပါတယ်လို့ အာမခံနိုင်ရဲ့လား ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဦးသန်းဌေးက မေးခွန်းထုတ်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ အုတ်တွင်းမြို့ နယ်၊ လက်ပံခုံကျေးရွာရှိ ဘောလုံးကွင်းတွင် ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၈ရက်) နံနက်ပိုင်းက ပြည်ထောင်စုကြံ
အလွန်အင်အားပြင်းထန်ပြီး ကြီးမားသည့် ထရာမီ တိုင်ဖွန်း ဂျပန်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ချဉ်းကပ်လာနေ
စက်တင်ဘာ ၂၈ လွန်ခဲတဲ့ ရက်သတ္တပတ် အကုန်မှာ အစပျိုးနေတဲ့ ထရာမီ တိုင်ဖွန်းဟာ အခုအချိန်မှာ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးကို လေ ၊ မိုး တွေနဲ့ ရစ်ပတ်လွှမ်းခြုံပြီး ဖျက်စီးသွားနိုင်သည်အထိ အလွန်အမင်းအားကောင်းလာနေတယ်လို့ ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီက သောကြာနေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၈ ) မှာ သတိပေးပြောကြားလိုက်ကြောင်း
ထိုင်းစူပါမားကတ်တွင် လိင်ဆက်ဆံနေသည့် ဓာတ်ပုံများရိုက်ခဲ့သည့်စုံတွဲ ရဲများရှာဖွေနေ
ဘန်ကောက်၊ စက်တင်ဘာ (၂၈) ထိုင်းနိုင်ငံမှ စူပါမားကတ်ကြီးတစ်ခုတွင်း စုံတွဲတစ်တွဲက လိင်ဆက်ဆံနေသည့် အဖော်အချွတ်ဓာတ်ပုံများရိုက်ခဲ့ရာ ရဲများက စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ရှာဖွေနေသည်။ SSBN Facebook စာမျက်နှာတွင် တင်ထားသော အထက်ပါဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုကလစ်များမှာ ဗုဒ္ဓဟူးညတွင် အလျှင်အမြန်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး လူပြောများလာသည်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံများတွင် ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် တီရှပ်ဝတ်ထားသောအမျိုသားစုံတွဲက အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးသုံး
အာရှသူ‌(၁)ဦးကို တိရစ္ဆာန်‌အဖြစ်‌ သရုပ်‌‌ဆောင်‌‌‌စေခဲ့ခြင်းအ‌ပေါ် လူအများဝေဖန်‌
စက်‌တင်‌ဘာ ၂၈ မကြာ‌သေးမီက ထွက်‌ရှိခဲ့တဲ့ ‌မှော်‌ရုပ်‌ရှင်‌ Fantastic Beasts ရဲ့ ‌ဒုတိယ‌မြောက် ဇာတ်‌လမ်းတွဲရုပ်‌ရှင် နမူနာဗီဒီယိုတိုထဲမှာ‌တော့ ‌တောင်‌ကိုရီးယားသူ က‌လော်‌ဒီယာကို အခြား‌‌သော လူဖြူသရုပ်‌‌ဆောင်‌များကြားမှာ ‌မြွေမအဖြစ်‌ သရုပ်‌‌ဆောင်‌ခိုင်း‌စေခဲ့ခြင်းအတွက်‌ လူအများရဲ့ ‌ဝေဖန်‌ခြင်းကို ခံ‌ခဲ့ရပါတယ်‌။ ကမ္ဘာ‌ကျော်‌ စာ‌ရေး‌ဆရာမ ‌ဂျေ‌ကေရိုးလင်း ‌ရေးသားထားပြီး
Today's Visits: 1,429
Yesterday's Visits: 1,601
Last 365 Days Visits: 19,772,703
Total Visits: 33,179,327
Copyright © 2018 Myanmar News Agency. Theme: ColorNews by ThemeGrill. Powered by WordPress.